घर - सजिलो बहु प्रदर्शन EMD सफ्टवेयर (गतिशील Signage)
इजी बहु प्रदर्शन EMD सफ्टवेयर (गतिशील Signage)
बजारमा सबभन्दा सस्तो डिजिटल साइनेज समाधान।
चिकित्सा र स्वास्थ्य
डिजिटल संकेत सॉफ्टवेयर
बजार मा सबै भन्दा किफायती।
सजिलो बहु प्रदर्शनको बारेमा
कसरी सजिलो बहु प्रदर्शन काम गर्दछ
चाहे तपाईं सानो व्यवसाय वा ठूलो उद्यम हुनुहुन्छ, सजिलो मल्टि डिस्प्लेले तपाईंको मल्टिमेडियालाई बहु प्रदर्शनहरूमा प्रदर्शन गर्न सजिलो बनाउँदछ। १ इजाजतपत्रको साथ, तपाईं एकै पटकमा २ media विभिन्न स्रोतहरू मिडिया प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, different विभिन्न प्रदर्शनमा। हामीसँग असीमित प्रदर्शन विकल्पहरूको लागि हाम्रो उद्यम समाधानहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
कम्प्युटर र टिभी प्रदर्शन सेटअप गर्नुहोस्।
इजि मल्टि डिस्प्ले सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहोस्।
तपाईंको प्रदर्शन सेटिंग्स कन्फिगर गर्नुहोस्।
यो सफ्टवेयर को हो?
इजि मल्टि डिस्प्ले कुनै पनि संगठनको लागि हो जुन आफ्ना ग्राहकहरू र पाहुनाहरूलाई डिजिटल जानकारी प्रदर्शन गर्न चाहन्छ।
थप पत्ता लगाउन तल क्लिक गर्नुहोस्।
क्याफे र रेस्टुरेन्ट
फेसन र रिटेल स्टोरहरू
डिजिटल स्वागत छ
तपाईं कसरी प्रयोग गर्नुहुनेछ
सजिलो बहु प्रदर्शन?
छलफल गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
अमेरिकी किन छान्नुपर्छ?
हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू धेरै जसो प्रति स्क्रीन € 30 चार्ज गर्छन्। नतिजाको रूपमा, तपाइँ प्रति एक स्क्रिनको लागि प्रति वर्ष € 360 भन्दा बढी तिर्नुहुन्छ! हाम्रा केही प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंलाई जेबबाट € १२०० को लागतमा थप सफ्टवेयर खरीद गर्न सोध्छन्। सजिलो बहु प्रदर्शन संग, तपाईं एक पटक मात्र भुक्तान गर्नुहोस्।
सजिलो बहु प्रदर्शन
कुनै अतिरिक्त लागतको लागि disp प्रदर्शन सम्म प्रयोग गर्नुहोस्।
कुनै चलिरहेको लागत वा मासिक शुल्क छैन।
सफ्टवेयर चलाउन आफ्नै कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहोस्।
कुनै इन्टरनेट आवश्यक छैन।
डिस्प्लेको संख्याको साथ लागत बढ्छ।
मासिक सदस्यता शुल्क तिर्नुहोस्।
सफ्टवेयर चलाउन तेस्रो पार्टी प्लेयर खरीद गर्नुहोस्।
क्लाउड आधारित सेवा जसलाई इन्टरनेट चाहिन्छ।
सजिलो मल्टि डिस्प्लेको छनौट गरेर, तपाईं प्रतिमहि € २ .० बचत गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंको डिजिटल साइनेज समाधानमा प्रति वर्ष € 250००० हो।
सहज मल्टि डिस्प्लेबाट लाभहरू
वेबसाइटहरू सुरूवात गर्नुहोस्, भिडियो स्ट्रिम गर्नुहोस्, र स्थानीय भिडियोहरू, छविहरू र संगीत प्रदर्शन गर्नुहोस्।
तपाइँको सजिलो बहु प्रदर्शन इजाजतपत्रको लागि एक पटक भुक्तान गर्नुहोस् र सदाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
प्लग र प्ले सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सजिलो। कुनै जटिल तेस्रो पार्टी उपकरण आवश्यक छैन।
हामी उत्कृष्ट समर्थन प्रदान गर्दछौं। हाम्रो खोजी गर्नुहोस् ज्ञान आधार, वा हामीलाई निजी प्रशिक्षणको लागि सोध्नुहोस्।
सफ्टवेयर तपाईको स्थानीय मशीनमा चल्छ। कुनै इन्टरनेट वा जटिल क्लाउड नेटवर्कहरू आवश्यक छैन।
हाम्रो उद्यम इजाजतपत्रको साथ, तपाईं अन्य सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू प्रदर्शन र चलाउन सक्नुहुनेछ।
हाम्रो ग्राहकहरु के भन्छन्
हामी स्लेटमा हाम्रो मेनू लेख्नु अघि। यो मेहनती थियो र कम प्रभाव थियो। इजि मल्टि डिस्प्लेको साथ, हामी तुरुन्तै हाम्रा ग्राहकहरूको ध्यान खिच्छौं।
ब्रुअरी प्रबन्धक, ब्रसेल्स
EMD को एक मूल्य छ कि सबै प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा गर्दछ! मूल्य धेरै फाइदाजनक छ र त्यहाँ कुनै लुकेका शुल्कहरू छैनन्। EMD टोली मेरो सबै आवश्यकताहरु को लागी धेरै उत्तरदायी र चौकस छ।
घर जग्गा प्रबन्धक, लूभैना-ला-न्यूवे
नामले सुझाव दिए जस्तै EMD प्रयोग गर्न सजिलो छ। मलाई कम्प्युटरको बारेमा केही थाहा छैन। EMD को साथ हामीसँग दन्त कार्यालयको लागि राम्रोसँग क्यालिब्रेट समाधान छ।
दन्त चिकित्सक, ब्रसेल्स
हाम्रा ग्राहकहरूको केहि
प्रत्येक महिना, १ 150० भन्दा बढी व्यवसायहरूले हाम्रो सफ्टवेयरको प्रयोग उनीहरूको भिडियो, छविहरू, र वेबसाइट सामग्री प्रदर्शन गर्नका लागि प्रयोग गरीरहेका छन् उनीहरूको व्यवसायलाई बढावा दिन र विज्ञापन गर्न।
कुल समाधान COST
हामी यसलाई कल गर्छौं सजिलो बहु प्रदर्शन किनभने उठिरहेको छ र एक संग चलिरहेको छ
हामीसँग डिजिटल साइनेज समाधान सजिलो छ।
तपाईलाई सुरू गर्नु पर्ने सबै कुरा ...
एक ग्राफिक्स कार्डको साथ एक कम्प्युटर - बहु प्रदर्शनहरू प्रयोग गर्न सक्षम।
तपाईको आवश्यक प्रदर्शन व्यवस्थाको लागि जति चाहिने टिभीको आवश्यक पर्दछ।
सजिलो बहु प्रदर्शन सफ्टवेयर।
कुनै लुकेका लागतहरू छैनन्।
कुनै मासिक शुल्क छैन।
कुनै जटिल हार्डवेयर छैन।
सफ्टवेयर मूल्य निर्धारण
कुनै एक addons वा अपग्रेडको साथ एक एकल इजाजतपत्र।
excl भ्याट *
१ सफ्टवेयर इजाजतपत्र
२ unique अद्वितीय मिडिया जोनहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
१२ महिनाको लागि क्लाउड सफ्टवेयर अपडेट
समावेस गरिएको छैन
स्थानीय नेटवर्क पहुँच
समर्थनको साथ अनलाइन प्रशिक्षण
अनुकूलित सफ्टवेयर ब्रान्डि।
हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प।
क्लाउड सफ्टवेयर अपडेट
१२ महिनाको लागि नि: शुल्क अपडेटहरू
समर्थन कर्मचारी संग १ घण्टा अनलाइन प्रशिक्षण
अनसाइट स्थापना र समर्थन
हाम्रो पूर्ण सफ्टवेयर र सेवाहरू बन्डल।
मूल्य निर्धारणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाम्रा उद्यम ग्राहकहरूको लागि उपलब्ध केहि सेवाहरू:
रिमोट टेक्निकल समर्थनमा पहुँच
तपाईंको आवश्यकताहरू छलफल गर्न आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
* एक अतिरिक्त वार्षिक शुल्क मात्र लागू हुन्छ यदि तपाईं हाम्रोमा साइन अप गर्नुभयो भने वैकल्पिक मर्मत सम्झौता। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् थप पत्ता लगाउन।
ईन्टरफेस प्रयोग गर्न सजिलो
हाम्रो ग्राहकहरू सजिलै मन पराउँछन् कि सजिलो मल्टि डिस्प्लेको साथ उनीहरूको मिडिया प्रदर्शन गर्न कति सरल छ। सफ्टवेयर ईन्टरफेसले कन्फिगरेसन प्रक्रिया मार्फत तपाईलाई चरणबद्ध चरण चरणमा मार्गदर्शन गर्दछ, तपाईंलाई बाटोको सबै सही प्रश्नहरू सोध्दै। सजिलो मल्टि डिस्प्लेको साथ उठ्न र चलाउनको लागि तपाईं प्रविधि गुरु हुन आवश्यक छैन।
​प्रदर्शन विजार्डमा निर्मित
​बहु कन्फिगरेसनहरू बचत गर्नुहोस्​
इजि मल्टि डिस्प्ले विजार्डले सेटअप प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्दछ।
बहु प्रदर्शन कन्फिगरेसन बचत गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सजिलोसँग लोड गर्नुहोस्।
भाषाको विकल्प: अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिश प्रगतिमा ...
थोरै थप मद्दत चाहियो? हाम्रो मानक मूल्य निर्धारण योजना जाँच गर्नुहोस् जुन १ घण्टा सफ्टवेयर प्रशिक्षण र समर्थनको साथ आउँदछ।
पछिल्लो FAQ लेख
नियन्त्रण स्क्रिनको साथ scre स्क्रीनमा कसरी प्रसारण गर्ने
तपाईले आफ्नो मिडिया वा युआरएलहरू scre स्क्रीनमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ EASY बहु डिस्प्लेको आधारभूत संस्करणसँग (इन्टरप्राइज संस्करण screen सम्म स्क्रिन भित्ता + १ नियन्त्रणको लागि) र only औं नियन्त्रण स्क्रिन मात्र एक पीसीसँग प्रयोग गर्नुहोस् (सुपरमार्केटका लागि आदर्श, फास्ट फूड आउटलेटहरू, किनमेल केन्द्रहरू, आदि)। महँगो विशिष्ट खेलाडीको आवश्यक पर्दैन जुन केवल एक वा दुई स्क्रिनहरू प्रबन्ध गर्दछ र cloud.० बादलको आवश्यक पर्दैन।
यो हाम्रो सफ्टवेयरको साथ धेरै सरल छ, केवल तपाईंको स्क्रीनहरू प्लग गर्नुहोस् (hdmi, displayport, dvi, rj45, रूपान्तरण USB, आदि। ईएमडी सबै अवस्थित प्रदर्शन आउटपुटहरूको साथ काम गर्दछ) त्यसपछि साना गियर बटनमा क्लिक गरेर सफ्टवेयर कन्फिगरेसन सेटिंग्समा जानुहोस्। "मिडिया प्रदर्शन गर्न तपाइँको डेस्कटप प्रयोग गर्दछ" को लागि धेरै शीर्ष र क्लिक गर्नुहोस्।
*41920 * 1080 स्क्रीनमा भिडियो स्क्रीन सहित ल्यान्डस्केप मोड।
* २.० स्क्रीन १2२०, पोर्ट्रेट मोडमा धेरै युआरएलहरू स्वचालित रूपमा स्क्रोल हुँदैछ।
* १ स्क्रीन, तपाईंको डेस्कटप तपाईंको डिजिटल साइनेज नियन्त्रण गर्न।
हामी प्रत्येक पर्दा विभाजित गर्न सक्दछौं र धेरै मिडिया वा url राख्न सक्दछौं (अधिकतम * * = = २4क्षेत्रहरू)। 🙂
LAT EST YOUTUBE VIDEOS
विशेष प्रस्ताव र छुट छ?
हाम्रो न्यूजलेटरमा साइन अप गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई कहिलेकाँही न्यूजलेटर र छूट कोड पठाउनेछौं। हामी तपाईको जानकारीलाई कहिले पनि स्प्याम, भाँडा वा बेच्ने छैनौं।
सजिलो बहु प्रदर्शन शोकेस
Le Plus Bel hôtel de Sarlat 🤩 #vitrinem Multime
Vous avez une agence immobilière, vous voulez aff
२ मा एक घर जग्गा एजेन्सी साइट प्रदर्शन को उदाहरण
थप लोड ... इन्स्टाग्राम मा पालन
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 इजी बहु प्रदर्शन EMD सफ्टवेयर (गतिशील Signage)
French English Spanish German Italian Dutch Portuguese Swedish Danish Irish Polish Bulgarian Czech Luxembourgish Turkish Russian Romanian Norwegian Galician Catalan Japanese Croatian Finnish Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Esperanto Estonian Filipino Frisian Georgian Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Pashto Persian Punjabi Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Sudanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
सम्पर्कमा रहनुहोस् र एउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् ...